Jona 4, 2018 Admin
Bittrex dia mamela ny mpampiasa vola mba hividy cryptocurrency amin'ny US dolara
Mpampiasa vola ankehitriny manana fahafahana hividy vaovao cryptocurrencies in US dolara.
Bittrex, ny Seattle-monina cryptocurrency fifanakalozana, dia nahatratra fifanarahana izay mamela ny mpampiasa vola hividy dizitaly in US dolara vola madinika. Taloha, varotra tamin'ny vola madinika ihany Coinbase, nomerika vola any California, azo nividy teo an dolara. Izany dia ampahany amin'ny eo ho eo 1500 vola madinika nomerika mitsingevana ao amin'ny cryptocurrenices rehetra izao.
Hividy ny vola madinika hafa, mpampiasa vola aloha tsy maintsy hiova ny vola tao Bitcoin. Ankehitriny dia tsy Bittrex.
Mpanorina sy Tale Jeneralin'ny Bill Shihara nilaza CNBC fa ny tanjona dia “mba hanitatra ny maro araka izay azo atao amin'ny tsena Bittrex,” hoy izy tamin'ny Zoma “Fast Vola.”
“Ary koa ny fanitarana azy io, mpanjifa rehetra ao amin'ny Bittrex dia ho afaka ny hiditra ny US dolara varotra,” hoy izy.
Ny fifanakalozan-kevitra Afaka manampy hifindra ny tsena. Koa satria vola madinika be dia be ihany no mety azo novidina amin'ny alalan'ny Bitcoin, ny hasarobidin'ny Bitcoin sy ny maro hafa nomerika vola correlated akaiky. Ny zava-dehibe ireo vondrona crypto mety teo aloha ary manomboka decouple avy Bitcoin, hoy Shihara, toy ny mpampiasa vola bebe kokoa varotra eto dolara.
Amin'izao fotoana izao, efa ho 200 nomerika isan-karazany azo natakalo vola madinika ao amin'ny Bittrex. Ny PDG fa ny “kely, Select startup isan'ny mpiara-miombon'antoka” miasa amin'ny tsenam-handoavana in dolara.
“Amin'izao dingana isika dia naka fanahy ny rafitra,” hoy izy. “Miasa akaiky izahay miaraka amin'ny banky mba ho azo antoka izy ireo dia afaka ny fandraisana ny Fiat mipetraka sy ny withdrawals, ary ny maotera izahay amin'ny varotra dia ho afaka ny handamina ny entana araka ny tokony ho.”
Cryptocurrency mbola betsaka unregulated any Etazonia, ka hitaona ny maro ara-bola sy ny mpampiasa vola andrim-panjakana mba ho mailo momba ny vola madinika ao amin'ny tontolo ny niely patrana hosoka sy ny Counterfeiting ICOs. Mpivarotra hafa efa nitady tsena any ivelany ny vola amin'ny fananan'ny nomerika toy ny Bitcoin.
Apple mpiara-manorina Steve Wozniak manantena Bitcoin lasa ny vola maneran-tokana
Filoha Tale Jeneralin'ny Twitter Jack Dorsey vao haingana nilaza fa mino bitcoin ho lasa ny vola maneran-tokana, zavatra izay Apple mpiara-manorina Steve Wozniak manantena hitranga.
“I mividy ho zavatra Jack Dorsey lazain'i, tsy izay mino fa voatery hitranga, fa noho Tiako izany ho toy izany, izany no izy fisainana madio… Bitcoin dia kajy voafaritra, misy anankiray be ny bitcoin, misy fomba izany no nozaraina ... ary ny madio sy tsy misy olombelona mihazakazaka, tsy misy orinasa mihazakazaka ary fotsiny ... mitombo sy mitombo ... ary ny sisa velona, fa ny ahy milaza zavatra izay amin'ny manan'aina sy ny maha zava-dehibe kokoa noho ny olombelona rehetra fivoriambe.”
Ahoana no Cryptocurrency M ...
Crypto ara-barotra App Robinhood nandefa in Colorado
Ny fifaninanana tany ...
Previous Post:Ethereum Wallet ImToken manana $ 35B in mipetraka, mihoatra ny 99% ny US banky